Mba tsy hampisy fitoniana ny fahasahiranam-bahoaka… | NewsMada
Haintany sy kere any atsimo, tondra-drano any avaratra… Inona koa? Tsy fandriampahalemana: tsy an-tanàn-dehibe, tsy ambanivohitra. Eo koa ny tsy fisian’ny asa, ny saritaka lava eto an-tampon-tanàn’ny Renivohitr’i Madagasikara amin’ny fandaminana sy fanadiovana: fanalana ireo mpivarotra amoron-dalana, fivangongoan’ny fako… Manampy trotraka ny ady tany etsy sy eroa.
Inona no itanisana izany? Tsy misy zava-baovao. Ny vaovao amin’izao, ny fijoroan’ny Antenimierandoholona, hanao fivoriana manokana rahampitso. Hitondra inona eo amin’ny fiainam-bahoaka amin’ireo fahasahiranana ireo? Hatramin’izao, saro-toerana ny fitondrana amin’ny fanarenam-pirenena, indrindra amin’ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka. Na tsy mahita inona ny vahoaka…
Tsy fantatra intsony izay tena antony: tsy fahamarinan-toerana, tsy fisian’ny vola… Hisy amin’izay ve ny fahamarinan-toerana sy fitoniana politika amin’ny fijoroan’ny Antenimierandoholona? Na ho avy amin’izay ny trosa sy ny fanampiana, fa ho tanteraka ireo fepetra takin’ny mpiara-miombon’antoka: fanjakana tan-dalàna, fitondrana tsara tantana, ady amin’ny kolikoly…
Hitondra inona amin’izany rehetra izany ireo loholona? Antony tsy azo anoarana ny hoe nifidianana azy ireo tao anatin’ny fotoam-pahavaratra, tsy niandrasana ireo mpifidy vaventy eny anivon’ny faritra sy ny faritany fa ny kaominina ihany. Hirosoana amin’izay ny tena fanarenam-pirenena, indrindra ny hoe sosialim-bahoaka? Be lavitra noho izay kely natomboka ny miandry sy takina.
Firosoana amin’ny fanatanterahana ny fanamby ny fitadiavana fahamarinan-toerana politika? Tena fitantanam-panjakana ho amin’ny tombontsoam-bahoaka amin’izay tokoa, fa tsy fitantanam-pahefana fotsiny… Mba hanelingelina sy tsy hampandry eritreritra andro aman’alina ny fahasahiranam-bahoaka, na eo aza izay lazaina ho fahamarinan-toerana sy fitoniana potilika. Mba tsy hampisy fitoniana ny mpitondra ny fahasahiranam-bahoaka! Alao hery…